Fiofanana » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Category Archive: Fiofanana
Sehatra fanabeazana ny Afafi-Fet. Fototry ny fahombiazana ny fiofanana sy ny fanofana mpiandraikitra.
AFAFI, EKA, Fiofanana
Fanohizana ny Fibanjinana ny Misterin’ny fiainan’i Kristy ny Herinandro fahatelo izay ibanjinana ny Fijalian’i Jesoa Kristy Tompo : manomboka eo amin’ny Sakafo farany tamin’ny Alakamisy Masina, ka hatramin’i Jesoa nalevina. Fandalinana ny safidy noraisina, anamarinana raha mafy orina izy, manoloana ny fitsapana sy ny fijaliana. Fibanjinana an’i Kristy nitsangan-ko velona kosa ny Herinandro fahaefatra : manomboka …
Ny Fibanjinana ny misterin’ny fiainan’i Kristy no saika mameno ny Herinandro faharoa. Io Fibanjinana io no mitarika ny mpanao Fampiasam-panahy hahalala bebe kokoa an’i Kristy ka hanahafany sy hanarahany dia Azy. Safidy irosoana eo amin’ny fiainana. Fibanjinana ny zava-miafina ao amin’ny Fahatongavan’i Kristy ho Nofo : manomboka amin’ny Filazan’ny Anjely, mitohy amin’ny Fahaterahan’ny Mpamonjy sy ny …
AFAFI, EKA, Fanentanana
Raha ny fizotry ny Fampiasam-panahy kosa no resahina dia mizara ho Herinandro efatra mazava tsara ny fomba entina miatrika sy manatanteraka azy. Ny Herinandro Voalohany [FP. 21 – 90] Ny Herinandro Voalohany dia fametrahana ny Fototra, ka Andriamanitra no Fiandohana sy Fototra. Fanaovana jery todika sy fandinihana ny fiainana lasa ihany koa ny Herinandro …
Entanin’ny Fanahy ho amin’ny Fanirahana Ry rahalahy sy anabavy Malala, Taona maro lasa izay no nandinihantsika ireto lafiny roa mahakasika ny antso maha-kristianina ireto dia: ny fanentanana antsika “hivoaka ny tenantsika ” mba hahafahana mihaino ny feon’Andriamanitra sy ny handinihana ny maha zava-dehibe ny ankohonam-piainana kristianina, amin’ny maha toerana sarobidy ahaterahan’ny antson’Andriamanitra, ikolokoloana azy sy …
Ny Aim-panahy iveloman’ny AFAFI-FET dia mifototra indrindra amin’ny Fampiasam-panahin’i Md Ignasy avy any Loiola. Notakarina avy amin’ny Fampiasam-panahin’i Md Ignasy. Mifototra indrindra amin’ny atao hoe Fampiasampanahy ny AFAFI FP= Fanazaran‐tena hivelona amin’ny ny Vavaka, ny Tenin’Andriamanitra, ny Eokaristia: Ny fampianaran’i Kristy manontolo sy ny fanarahan‐dia azy. Voafintina ao anatin’ny Laretirety 30 Andro, ahitana herinandro 4 …
Tags: EKA, Fampiasam-panahy
Loharano : ZENIT Taorian’ireo fanontaniana telo fanombohana dia miroso amin’ny lalina kokoa ny fandnihan-tena. Hoy ny Tompo : “Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra” Mirona mankany amin’Andriamanitra tokoa ny foko ? Tiako mihoatra ny zavatra rehetra izy ary hajaiko ny didiny ? Sao dia omeko vahana loatra eo amin’ny fiainako ny zava-mandalo ? Marina …
Tags: Fandinihan-tena, Karemy
Loharano : Lakroa.mg Son Eminence le Cardilnal Maurice Piat, Ianareo rahalahy malala ao amin’ny fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara sy avy amin’ireo nosin’ny ranomasimbe indianina, Ianareo pretra, ianareo diakra, Ianareo relijiozy lahy sy vavy, Ianareo mpiandraikitra ny fiangonana kristianina hafa finoana, Andriamantoa Filohan’ny Repoblika, Ianareo filohan’ny Repoblika teo aloha Andriamatoa Praiminisitra sy ianareo minisitra, …
Fototry ny fahombiazan’ny fifandraisana
Afafi ! Antsika rehetra ity tranonkala ity ka raha misy ny fifampizaràna tianao atao dia asa misalasala. Anio dia Aurélien RANDRIANANDRASANA, mpanabe tanora no manolotra antsika taridalana hahafahana manatsara bebe kokoa ny fifandraisana. ———– Maro ny fomba hahafahana manatsara ny fifandraisanao amin’ny hafa. Isan’ireny ny fahavononana hizara hafaliana sy ny fananana fomba fijery miabo (positif). …